Dammaanadda MediaLight - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Haddii carruurtaadu yihiin wax aniga oo kale ah, waxay si joogto ah ugu tuurayaan alaabada ay ku ciyaaraan TV-ga. Tani ma noqon karto oo kaliya mid xanaaq badan maxaa yeelay waa inaad sii wadataa soo qaadista dhammaan qaybaha, laakiin sidoo kale runtii waa wax laga xumaado markaad ogaato in qalabkaaga fog uu hadda maqan yahay. Ha walwelin in kastoo! MediaLight waxaa ka mid ah dammaanad-qaad 5 sano oo dhammaystiran oo loogu talagalay qayb kasta - xitaa waxaan daboolaynaa luminta iyo xatooyada.
MediaLight wuxuu ka qaalisan yahay qiimaha hore ee nalalka kale ee LED-ka maxaa yeelay waxaan u isticmaalnaa si wanaagsan, ka saxan LED-yada iyo qaybo adag. Waxaan ku qaabeyneynaa wax walba qaab habeysan si nidaamka looga dhigo mid sahlan oo dayactirkiisa haddii wax qaldamaan. Nidaamyo jaban, waxaad badanaa u baahan tahay inaad beddesho nidaamka oo dhan markii hal qayb uu jabo. Tani waxay ka dhigan tahay in muddo kadib, wax soo saarkeenu uusan sifiican u shaqeynaynin - qiimahiisu ka yaryahay!
Haddii wax ku dhacaan MediaLight-kaaga, ama waan ogaan doonnaa sababta oo waxaan u diri doonnaa qayb beddel ah oo lagama maarmaan ah ama waxaan ku beddeleynaa lacag la'aan.
Tusaalooyinka sheegashada dammaanadda la daboolay:
"Qeybta hoose ayaa daad qaaday waxayna qaadatay TV -geyga."
Nalalka ayaa shaqadii joojiyay mana garanayo sababta.
"Istuudiyahaygii waa la dhacay" (waa la daboolay haddii warbixin booliis la bixiyo).
Waxaan ku dhibay rakibideydii.
Aan la daboolin:
Diidmada in la caawiyo wakiilka MediaLight wax ka qabashada sababta dhibaatada ka timaadda liiska arrimaha inta badan lala kulmo.
Xaaladdan oo kale, ma soo diri karno qaybo beddelaad ah illaa macluumaad laga bixiyo muddada damaanadda gudaheeda.
Burbur ula kac ah ama qashin
Maraakiibta gudaha kadib 2 sano laga bilaabo taariikhda wax iibsiga. Laba sano kadib, waxaan beddeli doonnaa wixii burburay ama dhinnaa ilaa 5 sano laga bilaabo taariikhda iibsiga, laakiin waxaan u diri doonaa qaansheeg KELIYA qiimaha boostada (ama waxaad bixin kartaa xisaab UPS ama Fedex).
Dhamaan Maraakiibta Caalamiga ah laga bilaabo 65 maalmood kadib helitaanka alaabtaada. Xirmooyinka lumay marka laga reebo (eeg tanyada page maraakiibta si loo barto marka xirmo loo arko inay luntay) ama unugyo cilladaysan, ma daboolayno maraakiibta caalamiga ah. Waxaan beddeli doonaa qaybaha lagama maarmaanka u ah lacag la'aan, laakiin waxaan qaansheegi doonnaa rarka ka hor inta aan qaybaha la dirin. Had iyo jeer way fiicantahay inaad ka iibsato MediaLight ganacsade ka tirsan gobolkaaga kaasoo dabooli doona rarka qaybaha beddelka ah.
Laga bilaabo isla marka aad rakibatid qalabkaaga 'MediaLight', waxaan halkaas u joogi doonaa inaan ku caawino. Haddii wax ka khaldamaan alaabtayada, ha ka welwelin! Waxaan rabnaa inaan ku xusuusinno waxa naga dhigay inaan ka soo baxno shirkadaha kale ee nalalka markii ugu horreysay: Qeybaha tayada ee soconaya sannadaha.
Waxaan ogaannay inay jirto dalool u furan suuqa marka ay timaado saxnaanta, tayada iyo adeegga. Waxaan ku haynaa alaab-qeybiyeyaashayada heerar isku mid ah. Markii aan bedelno qayb, alaab-qeybiyeyaashayagu dib ayey noo celinayaan - tani waxay ka dhigaysaa dhammaan alaabteenna mid wanaagsan oo qof walba la xisaabtanta.
MediaLight wuxuu ku sameeyaa waxa ay ku tiraahdo daasadda. Waxaan ku soo darnay wax walba oo aad ugu baahan tahay rakibaaddaada, sidaa darteed ma jiri doonaan qalab dheeri ah oo loo baahan yahay ama safarro lagu tagayo dukaamada qalabka si loo bilaabo The MediaLight maanta!